के पारस क्यानको निलम्बन फुकुवाले खुसी छैनन्? खेल्छु भन्ने नखेल्ने किन गर्छन्?
२०७६ कात्तिक १८ सोमवार
काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)माथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट संघ ९आईसीसी०ले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवापछि राष्ट्रिय टिमका पूर्वकप्तान पारस खड्का नेपाली क्रिकेटबाट टाढिँदै गएको देखिएको छ । यसले क्रिकेट जगतमा एउटा प्रश्न उठेको छ – के निलम्बन फुकुवाले पारस खुसी छैनन् रु उनका गतिविधिले भने खुसी नभएको देखाउँछ ।
२०१६ अप्रिल २४ मा आईसीसीको बोर्ड बैठकले क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप र राजनीतिकरण भएको भन्दै अश्चितकालीन निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। आईसीसीको यो निर्णयले विस्तारै सफलता पाउँदै गरेको नेपाली क्रिकेटमा कालो बादल लाग्यो। क्यान निलम्बनमा परे पनि आइसीसीले नेपाली टिमलाई खेल्न भने रोक लगाएन बरु टिमको व्यवस्थापन आफैंले गर्यो । जसको फलस्वरुप नेपाली क्रिकेट आईसीसी र एसीसीका प्रतियोगिताहरुमा सहभागी भइरहँदा ओडिआईको मान्यतासम्म पाउन सफल भयो। योबीचमा अझ सफलता पाउन सक्षम नेपाली क्रिकेट क्यान निलम्बन हुँदा अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेन।
क्यानलाई निलम्बन गरेर नेपाली क्रिकेटको जिम्मेवारी आईसीसी आफैले लियो, क्यानकी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेलाई आईसीसीको प्रतिनिधि तोकियो। भावना घिमिरेको बहिर्गमनपछि आईसीसीले नेपाली क्रिकेट हेर्नका लागि तत्कालीन कप्तान पारस खड्कालाई प्रतिनिधि बनायो। यहीँबाट पारस नेपाली क्रिकेटमा हावी भए। फिल्डमा राम्रो खेल्ने तथा नेपाली टिमको नेतृत्व गर्ने र आईसीसीको पनि प्रतिनिधि हुन पाएपछि पारस क्यानभन्दा पनि शक्तिशाली भए।
समय सधैँ एउटै हुँदैन। यही अक्टुबर १४ मा आईसीसीले क्यानको निलम्बन फुकुवा गर्यो। शर्तसहित फुकुवा भने पनि त्यो फुकुवा नै भएको क्यान अध्यक्ष चुतरबहादुर चन्दले त्यतिबेला डिसी नेपालसँगको कुराकानीमा बताएका थिए।
१५ अक्टुबरमा नेपाली क्रिकेटका लागि अप्रत्याशित घटना सार्वजनिक भयो – कप्तान पारस खड्काले कप्तान पदबाट राजीनामा घोषणा गरे। आईसीसीको निलम्बन फुकुवामा खुशी भएको नेपाली क्रिकेटमा पारसको त्यो निर्णय पक्कै पनि निराशाजनक थियो। पारसले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा घोषणा गरेपछि क्यान अध्यक्ष चन्दले डिसी नेपालसँग दिएको प्रतिक्रियामा भनेका थिए, ‘निलम्बन फुकुवाले सबै खुशी हुँदा उहाँ दुःखी हुनु भएको हो रु’
क्यान अध्यक्ष चन्दको प्रश्नलाई बल पुर्याउने गरी पारसले गतिविधि गरेका छन्। १४ अक्टुबरमा शुरु भएको वुमेन च्याम्पियन्स लीगका लागि सफलताको शुभकामना सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका पारसले निलम्बन फुकुवा बारे भने कुनै प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा लेखेनन्। कुनै शुभेच्छा प्रकट गरेनन्। यसलाई उनी क्यानको निलम्बनसँग खुशी नभएको वा नवनिर्वाचित क्यानसँग खुशी नभएको रुपमा क्रिकेट जगतले बुझेको छ।
क्यानले पारसलाई राजीनामाबारे पत्र लेखेरै सोधेपछि इमेलमार्फत राजीनामा बुझाए। त्यसपछिमात्र क्यानले नयाँ कप्तानका रुपमा ज्ञानेन्द्र मल्ललाई ‘अर्को निर्णय’ नहुँदासम्मका लागि कप्तान बनायो।यसपछि आईसीसीले मेरिलेबोन क्रिकेट क्लव (एमसीसीसँग) तीन प्रारुपमा खेल्ने नेपाली टिम घोषणा गर्दा पारस एक दिवसीय टिममा मात्र परे। सोमबार कीर्तिपुर मैदानमा एमसीसीसँग खेल हुँदा पारस भने मैदानमा देखिएनन्।
यसपछि भने पारस र क्यानबीच खटपट रहेको आशंकालाई बल पुर्यायो। क्यान सचिव तथा प्रवक्ता अशोकनाथ प्याकुरेलले डिसी नेपालसँग भने, ‘उहाँले खेल्नुपर्ने हो, किन खेल्नु भएन कुनै जानकारी छैन।’ टिममा रहेको सबैभन्दा वरिष्ठ खेलाडी मैदानमा नदेखिनुलाई नेपाली क्रिकेटमा कुनै उथलपुथलको संकेतका रुपमा बुझिएको छ।स्रोतका अनुसार आईसीसीले टिम घोषणा गर्नुअघि नै पारसले आफु पारिवारिक कारण खेल्न नसक्ने जानकारी गराएका थिए। तर, किन आईसीसीले उनलाई टिममा समेट्यो यो प्रश्न भने अनुत्तरित छ।
सोमबार पारसले नखेल्नुको चुरो कारण अबुधावीमा हुन गइरहेको टि–टेन लिगसँग जोडिएको छ। इमर्जिङ एसिया कपका लागि नेपालबाट नखेल्ने र टि–टेन लिग खेल्न जाने भन्दै पारसले क्यानमा नो अब्जेक्शन लेटरका लागि निवेदन दिएका छन्। तर, हालसम्म क्यानले यो विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। र, त्यति सजिलै नो अब्जेक्शन लेटर दिने पक्षमा पनि क्यान छैन।
क्यान उच्च स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘देश प्राथामिकतामा हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुले सोच्नु पर्छ। होला उहाँहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिग खेल्ने अवसर पाउनु भयो, त्यो नेपाली क्रिकेटका लागि नयाँ र राम्रो कुरा हो। तर, देशका लागि खेल्ने कुराबारे उहाँले सोच्नुपर्छ। यो विषयमा पनि कुरा हुन्छ।’ स्रोतले पारसले नो अब्जेक्शन लेटर पाउने सम्भावना रहेको बतायो।
राष्ट्रिय टिमका अर्का स्टार बलर सन्दिप लामिछानेसमेत सोमबार एमसीसीविरुद्धको खेलमा मैदानबाहिर रहे । उनी मैदानबाहिर रहने कारण पनि पारसको जस्तै टि–१० लिग नै भएको बुझिएको छ । उनले समेत क्यानमा इमर्जिङ कप नखेल्ने भन्दै एनओसीका लागि निवेदन दिएका छन् । तर, उनले निवेदन दिन ढिलाइ गरेकोले उनले इमर्जिङ कपबाट विदा पाउन कठिन भएको बताइएको छ ।
टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिएपछि पारसले लगातार दुई प्रतियोगितामा नेपालका लागि नखेल्ने लगभग पक्का हुँदा उनले त्यसपछिका प्रतियोगितामा के गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। एमसीसीसँग र इमर्जिङ कप नखेल्ने भएपछि पारसको नेपाली क्रिकेटमा पुनरागम नै अनिश्चित बनेको छ।
क्यानको वर्तमान नेतृत्वसँग पारसको कहिल्यै पनि राम्रो सम्बन्ध भएन। २०१४ मा बंगलादेशमा भएको टि–ट्वान्टी विश्व कप खेलेर स्वदेश फर्किएपछि पारसकै नेतृत्वमा ंखेलाडीले आन्दोलन गरेका थिए भने, तत्कालीन क्यान पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यतिबेलाका क्यान पदाधिकारी अहिले क्यानको नेतृत्वमा छन्।
क्यानका एक पदाधिकारीले भने, ‘पारस र ज्ञानेन्द्र चन्द समूहलाई क्यान महाधिवेशनमा पराजित गराउन चाहन्थे। यसका लागि उनीहरुले क्यानको प्रदेश नम्बर १ मा गएर प्रचारै गरेका थिए। उपाध्यक्षमा लडेर पराजित भएका डुण्डु लामालाई महासचिब बनाउने उनीहरुको चाहाना थियो। तर सम्भव भएन।’ यतिमात्र होइन ती पदाधिकारीले भने, ‘क्यान निलम्बन फुकुवा नगर्न अनुरोधसहितका इमेल आईसीसीलाई गएका थिए। यो कसले किन गर्यो विस्तारै खुल्दै जाला।’
जेठ १४ गते बुधबारको राशिफल यस्तो छ